Alshabaab oo deegaano horleh laga qabsaday |
Alshabaab oo deegaano horleh laga qabsaday
Muqdisho(Somalimedia)-Maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in Alshabaab ay maanta weerar ku qaadeen fariisin ciidamada dowlada SOomaaliya ay ku sugnaa, waxaana halkaasi ka dhashay dagaal u dhaxeeyay ciidamada dowlada iyo kuwa Alshabaab.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu geystay dhimashi iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay waxaana la ogeyn heerka uu la egyahay.
Maamulka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in dagaalkaasi ciidamada meletariga ay kasoo hoyeen guulo la taaban karo, waxaana gudoonka degmadaasi uu sheegay in Alshabaab ay kala wareegeen deegaano cusub.
Maxamed Macalin Gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegay in ciidamada meletariga dowlada Soomaaliya ay qabsadeen tuulooyin hoos taga degmadaasi oo Alshabaab ay maamuli jireen, sida uu hadalka u dhigay.
“ciidamada dowlada waxay qabsadeen tuulooyin ay joogeen qoladaasi nabad diidka ee Alshabaab, dagaal ayaa ka dhacay oo ciidamada dowlada ayaa ku qabsaday”sidaasi ayuu yiri gudoomiyaha oo la hadlay Caasimada Online.
Alshabaab ayaanan wali ka hadli hadalka maamulka degmada Xudur kasoo yeeray oo ku aadan in Alshabaab maanta lagala wareegay deegaano hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool.